Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo u dhawaaqay howlgal waddo furis ah | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo u dhawaaqay howlgal waddo furis ah
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo u dhawaaqay howlgal waddo furis ah
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen) ayaa sheegay inay ku guuleysteen xaqiijinta amniga inta badan degmooyinka Gobolka Shabeellaha Hoose maka laga reebo kuwa ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Ammaanka ay sameeyen howlgallo kala duwan, tasina ay suurto gelisay in Ciidamada gacanta ku dhigaan degmooyinka Shabeellaha Hoose, balse kaliya ay u harsan yihiin degmooyinka Sablaale & Kuntuwaareey oo ay maamulaan Al-Shabaab.
Sidoo kale Madaxweyne laftaagreen ayaa sheegay in wadooyinka qaar ee Gobolka Shabeellaha Hoose aan la isaga kala gudbi Karin, wuxuuna Guddoomiyaha Cusub ee Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose & kuxigeenkiisa ka dalbaday inay keenaan qorsho la isugu furaayo waddooyinka Gobolkaas.
Hadalkaan ayaa Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen) waxa uu sheegay xilli ka qeyb galay munaasabad lagu dhaarinayay Maamulka Cusub ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Previous articleQiimaha lacagta dalka Turkiga ee Liiraha oo hoos u dhacday kadib markii m/weynaha dalkaas Rajab Dayip Ordegan
Next articleMIDOWGA AFRIKA OO KU BAAQAY IN LA SII DAAYO RA’IISAL WASAARIHII DALKA SUUDAAN
Best selling Blog, News, and Magazine theme for more than 7 years; A clean and modern theme, perfect for both magazines and business websites
Halkaan ka Daawo Wararkii ugu Danbeeyey Xaalada Liida iyo dhulka...
Madaxweyanahii hore Soomaaliya Farmaajo oo qas iyo fowdo Kabilaabay Doorshada Golaha...
Sheekh Xasan Daahir Aweys “ waxaan soo jeedinaa in lala dagaalamo...
TPLF oo lagu eedeeyay in Ismaamulka Amxaarada ay ku dishay 184...
Digniin weeraro Qaraxyo ah oo la shaaciye iyo Goobalah lala doonaayo